Madaxda Afrika Iyo Shiinaha Oo Ku Shiray Johannesburg | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Madaxda Afrika Iyo Shiinaha Oo Ku Shiray Johannesburg
Madaxda Afrika Iyo Shiinaha Oo Ku Shiray Johannesburg
Toddobaadkaan waxaa lagu soo gaba-gabeeyay magaalada Johannes-burg ee dalka Koon-fur Afrika shirkii u dhexeeyay Shiinaha iyo hoggaaamiyeyaasha qa-aradda Afrika. Shirkaan oo saddexdii sanaba mar la qabto ayaa wax-aa ka soo qeybgalay inta badan madaxda Afrika iyo ganacsato, iyadoo looga hadlayay xiriirka ka dhexeeya Shiinaha iyo Afrika iyo sidii uu Shiinaha maalgashi bal-laaraan ugu samaysan lahaa qaaradda Afrika.
Madaxweynaha Shi-inaha Xi Jinping ayaa ka sheegay shirka in uu dalkiisa kordhinayo maalgashiga Afrika, gaar ahaan warshadaha soo saara waxyaabaha Afrika ay Shiinaha u soo dhoofiso. Madasha shirka wuxuu uga dhawaaqay $60 bilyan oo kaalmo iyo maalgashi isugu jirta, taasi oo lagu horu-marin doono beeraha, kaabeyaasha dhaqa-alaha, waddooyinka iyo tababarro qaaradda ah. Isagoo ka hadlayay madasha oo ah madal ay ku kulmaan hoggaamiy-eyaasha qaaradda Afrika iyo Shiinaha ayuu ku celiyay madaxweynaha mowqifka Shiinaha ee ah in aysan marn-aba faragelin doonin arrimaha siyaasadda ee qaaradda Afrika.
Shiinaha ayaa qorsheynaya inuu horumariyso kaabeyaa-sha dhaqaalaha, wax soo-saarka beeraha iyo dhimista saboolnimada qaaradda.Madaxweynaha Koon-fur Afrika, Jacob Zuma, oo dalkiisa uu mar-tigelinayay shirka ayaa sheegay in xiriir dhaw oo dhex mara Shiinaha iyo Afrika uu noqon doono mid ku saleysan iskaashi ay labada dhi-nacba ka faa’iideystaan.
Dhanka kale, Madax-weynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Max-amuud iyo wafdiiga ayaa kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha Shiinaha intii uu soc-day shirka. Waxay ka wadahadleen dadaalkaay Soomaaliya ugu jirto inay hesho maal-gashi shisheeye iyo xoojinta xiriirka diblomaasiya-deed ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Shi-inaha. Waa markii labaad oo la qabanayo Madasha Iskaashiga Shiinaha iyo Africa (Focac) tan iyo markii la aasaasay ma-dasha sanadkii 2000.
W/Q: Aadan Salaad (Suxeyfa)
Previous articleKoonfur Is waraysataye, Waqooyi yaa u maqan?
Next articleFitnada Federaalka iyo Colaadda Gaalkacyo